Baningi abantu eboshelwe "Godfather" yakhe. Le filimu wathwebula inoveli Mario Pyuzo. Incwadi yatholakala ngo-1969, futhi isithombe ezinyakazayo waphuma emva kweminyaka 3. Tindzima main kwakwenziwa ezinjengalezi abadlali abadume efana Dzheyms Kaan, Al Pacino futhi UMarlon Brando.
Omunye imisebenzi engcono cinema
"The Godfather" - ifilimu ukuthi kubhekwa omunye komkhulu gangster izithombe Ngokwe-American Film Institute. Lo msebenzi unendawo emlandweni cinema. "The Godfather", ucaphuna okuyinto sezindebeni cishe embulungeni yonke, futhi kuthatha zanda phezulu imisebenzi emihlanu indawo IMDb Isilinganiso. Tholakele ezintathu "Oscars": I-Kuhle Umqondisi, indima esemqoka kule ukuqokwa "Kuhle Film Yonyaka."
Umklomelo waklonyeliswa njengendlela intela ukuze esiyingqayizivele, webhayisikobho kwaguqulwa Coppola futhi Puzo. Crew abangu ahlonishwe nge imiklomelo ehlukahlukene kodwa nesishiyagalolunye nesikhombisa ukuqokwa kwakhe. indaba Mkhulu ifilimu "The Godfather". Quotes namaqhawe izinga okusezingeni ngakho futhi ukucabangela ukuthi isithombe isikhathi eside, isesikhundleni yesibili ohlwini imisebenzi engcono cinema emlandweni Melika.
Imisho abaye baba ezinamaphiko
"Ngizobuya kumenza abe sipho akakwazi senqabe" ... Kunzima ukuthola umuntu wayengeke abe ujwayelene nalesi sitatimende. Sikhuluma isibhamu, kokwengamela ethempelini - okungenani, lapho mobsters yakhetha njalo. Ukuze bawenze kahle umsebenzi wabo ukuze ithimba ezingamaKristu kwakudingeka zisebenzele ku isethi izinyanga ezine. Lapho bonke isilungile, ngiyeza Mashi futhi premiered ngo 1971. Yingaleso sikhathi-ke, ngemva amaseshini lokuqala, imishwana enjengethi 'iyingozi kakhulu kunokuba izibhamu owesifazane Sicilia "waqala ukungena ekuphileni kwansuku zonke abantu, ukuze simazi kangcono ngokuthi ubuciko.
ezithakazelisayo kakhulu ukuthi isithombe isabelomali lalilincane - abangaba yizigidi ezingu-6 zamaRandi. Ngiqinisile isibonelo sendlela, ngaphansi ukuphathwa ohlakaniphile futhi umsebenzi omuhle kungenziwa sibonga engenzelwa izimali ezinkulu hhayi imiphumela ekhethekile, kodwa yi-ukujula kanye nekhwalithi ifilimu.
Ngenxa yalokho, abahleli sokuqasha alethwe kwezigidi ezingu 268 zamaRandi. Yini obumangalisayo yimpumelelo! Ngithande yizilaleli, "The Godfather." Izilinganiso ngokwethukela lizwakale izinkampani zabantu, okuyinto baxoxa ngomdlandla isithombe abukwe kamuva.
izigcawu emangalisa futhi izingcaphuno brilliant
"Uphume kimi ngamazwi athi:" Don Corleone, ngiphe ubulungisa ". Kodwa ukhuluma ngaphandle nenhlonipho, ungenawo athembisa ubungani, ungazange ngisho ngishayele lo ibhapathizwa "- lokhu lesisho, ihlose ukukhombisa ukuthi umlingiswa oyinhloko akukhona nje Thug futhi avaricious indoda endaweni yesehlakalo lapho wakhululwa. Anakho izimiso zakhe siqu yokuzikhethela, esenza ziyabonisa futhi kunalokho khulula usizo imindeni kuka ukubulala ngemali, ka awucela godson yakhe.
"Mhlawumbe, kodwa kungenzeka ukuthi lokhu ngeke kwenzeke, ngiyakubuyisa kuwe isevisi, kodwa kuze kube yileso sikhathi ukwamukela ubulungiswa njengesipho ngosuku lomshado indodakazi yami" - hero Uhlale ekulungele ukusiza umzala wakhe cishe esingenandaba. I pay kangcono ngayo ngokuzithandela, ngawo izihlobo kufanele basizane hhayi ngoba esaba, kodwa inkululeko yabo yokuzikhethela.
"Uthando luphola, ubungane uphela. Futhi igazi kuphela izibopho - kungokwaphakade "- kuba lesi simiso yizicukuthwane ingenye imiqondo esemqoka nesekelayo wonke amaqiniso.
Pretty ifilimu olujulile ngokomzwelo "The Godfather". Ukucaphuna kusuka kuye uma lwangena ngu electrocution. "Musa uyayizonda isitha. Imizwelo iphazamise ukucabanga, "- kuzwakala kule filimu, kabani izinhlamvu ngokuyinhloko osomabhizinisi. Zonke izenzo zabo zinqunywa nesidingo lapho amathiphu umdlalo omkhulu ukuthi ukuhola.
Le filimu kwenza izinto eziningi ukucabangela
Futhi, imishwana eziningi ingena subtext ezijulile zefilosofi. Lokhu singasho sithi ngokucabanga 'nosuku olulodwa ", okuvela kuyo lapho asikwazi ukuqinisekisa.
Kulesi ifilimu, eziningi ekuphileni, kodwa ngesikhathi esifanayo, kukhona nje namathemba angenaso isisekelo esizwakalayo umphakathi ukuhlonipha kanye namasiko udumo umndeni. "UVincent, hhayi ngezwi ukuthi ucabangani abantu abangabazi nhlobo!" - uthi ibinzana ukuthi singamethemba kwasekuqaleni kuphela ukuvala. Lesi sithombe ufunde okuningi. Against isizinda kuyimpi futhi ungafi is ingafi umthetho ngobuqhawe, Ukuvikelwa abathandekayo, isithunzi. Ungakwazi uvale amehlo akho ukuba imizwa yabanye abantu, kodwa ngenxa isidingo sabo ukuma kuze kube sekupheleni.
Kukhona futhi eziningi esonta amadlingozi futhi badedelane, eziningi ukufa legazi. Ngakolunye uhlangothi, ifilimu kanzima, esonta enobudlova icebo ukuthi uyokusekela hhayi nje ngomqondo izwele. Ngakolunye uhlangothi, kuba indaba captivates, kwenza waphefumula kanzima bese ulinda lokutawulandzela. "Akukho siqu. Vele ibhizinisi "- liphinyiselwe lesi sithombe. Izenzo nesihluku olwenziwa ngenhloso ukuze uthole kabusha endaweni zazo elangeni.
Omunye angase akuzwe ukudabuka uma ubuka, futhi abanye ngeke yehle injabulo, ukuzizwa ukuthi wayenephutha obishini lokuphelelwa nezenzakalo nemizwelo ukuthi awaziwa ukuba abantu abavamile emgwaqweni. Against isizinda esikhanyayo iholide umshado izikhathi lapha eziningi isibhamu ukubeka ethempelini lakhe, nakuba nginikeza imisho enjalo ukukhanya afana nesifo sohlangothi esingesibi kakhulu of the esibayeni. Yiqiniso, wonke amazwi ebhaliwe ngale ndlela kufana umbhalo oqoshwe ulotshwe itshe lethuna.
Gcina nongenanembeza kuqiniswa ngisho emkhathini
Abalingiswa kudingeka siphile njalo ingozi emkhathini. Njengezilwane zasendle, zihlala ndawonye futhi uwine emuva kwesokudla nomunye ekuphileni. Sinenkosi ukulahla zonke imizwa engadingekile asondele ndaba nangengqondo abandayo, ukuthi akulula kuleli zwe elinzima ezinjalo.
- Awu, wena umane uyenza ukubulala kwabo bobabili. ' Bese yini?
- ngizobuya usuhlala phansi futhi uqedele idina lakho.
Lokhu ukubiza uveza yokuthi lokubulala gangster imvelo - limane inqubo isimiso lapho ngezikhathi ezithile kunesidingo.
Ngaphezu kwalokho, egazini sibizwa ngokuthi i-okunethezeka bayehluleka ngekwetimali. Usomabhizinisi ezinhle ngeke igeleze kulo. "Bheka, ngimelene wokuchithwa kwegazi. Iletha nezindleko ", - lesi sitatimende kuyacaca ukuthi ukubulala kuyinto kakhulu, ngenxa yezimo.
Ngisho nalapho ukuphila kwabantu niqhubeke ukugeleza omunye ngemva komunye, izinhlamvu le filimu ungafuni libeke ngokwabo njengoba nababulali. izenzakalo ezicindezelayo zenzeka ngokumelene ingemuva afuthwe ngesibulali ezicashile amahlaya amabinzana isitayela "Shiya isibhamu. 'Hwebani amakhekhe. "
"Umuntu ongenayo ukuchitha isikhathi nomkhaya wakhe, ngeke ize ibe indoda yangempela" - umusho uthi namaqhawe abantu kwenhliziyo okukhulu futhi izenzo yenza ngokuphelelwa yithemba. Abakwazi uthande inkanuko futhi ngokuphuthumayo yokuziphindiselela. Kubo, akukho isigamu-izinyathelo. Futhi wakhuthaza uthando umndeni wakhe, umuntu okufanelekelayo ingenye ongenayo onga isikhathi nomkhaya wakhe. "Umuntu akufanele neze ibe nomuzwa uhlala engenazinkathazo. Lezi kungaba unkosikazi nezingane, kodwa hhayi umuntu. " abantu Vala kubaluleke kakhulu kunanoma iyiphi imali futhi isikhundla. Isifundisa ifilimu. Ngenxa indodakazi noma unkosikazi akuyona into edabukisayo ukuzibulala noma ukuya ukufa, ngoba yini enye ukuba baphilele ukuthola, uma kungekhona ngenxa yabo? Ayikho into ebaluleke ngaphezu kwezingane ukuba yindoda yangempela.
Ngaphakathi the gama of okuyinto uchithe igazi elinengi
Into ebaluleke kakhulu - ukuthi abantu abakuphila kwabo kwakhelwe kakhulukazi evezwe kule ifilimu, bayabulawa hhayi ngenxa yothando lwabo ubudlova futhi bloodthirstiness. Basuke eliqhutshwa izisusa ephakeme - Ukuvikelwa omkhaya. Ngu udlame iphathwa njengendlela inqubo, okuyinto wagomela ezizwa ebophekile kunokuba inkanuko ubuhlanya, okuyinto ngezinye izikhathi ihlanganisa abantu abafuna ukuthola yokuziphindiselela.
Konke kwenzeka ngamabomu, ubande uma ukhuluma naye futhi ngokucophelela, hhayi ngamawala futhi ngaphandle kokucabanga. Kusukela ifilimu ingase ikhishwe ngaphandle izifundo eziyisisekelo ngokuyinhloko siguqula indlela yokucabanga. imiphumela enjalo ihlanganisa isithombe isigaba imisebenzi engcono cinema.
Ilya Drevnov: Biography, ukuphila siqu, amaqiniso athakazelisayo
Le filimu "Van Helsing": nabalingisi. Hyu Dzhekman, Keyt Bekinseyl nabanye
"Izingane 90s": nabalingisi we ifilimu
Clint Barton - ayengumuntu ofana nathi e iqembu ompetha
UVladimir Tolokonnikov - Ezigcwalisiwe Umculi weRiphabhulikhi Kazakhstan
Pochard ezivamile: izithombe, incazelo, ukukhahlamezeka kwendawo
Konchalovsky Ukudweba "Lilacs kubhasikidi": incazelo
U-Roman Selin wakhuluma ngamathuba okusebenzisana kwamaRussia namaMelika ngemuva kokhetho lukaTrump
Biography of umculi odumile German Kim Petras, Neno futhi Bobo